Hurumende Yoramba Kuti VaNgarivhume Vabuditswe Mujeri reChikurubi Umo Vonyimwa Chikafu
Mutungamiri weTransform Zimbabwe president Jacob Ngarivhume
Mutongi wedare ramejastiriti muHarare VaTrynos Utahwashe vave kutarisirwa nemusi weChishanu kuti vape mutongo wavo wekuti mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe VaJacob Ngarivhume vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete.
Nyaya yaVaNgarivhume yange iri mudare zvekare nhasi gweta ravo VaMoses Nkomo vachikumbira kuti vaburitswe mujeri reChikurubi Maximum Prison sezvo kuratidzira kwavanonzi vaironga musi wa 31 Chikunguru kwakadarika pasina kana mhirizhonga.
Dare iri nerepamuso akambormba kupa VaNgarivhume mukana wekubvisa mari yechibatiso asi VaNkomo vakumbira kuti vabviswe madhora zviuru zvishanu semari yechibatiso pamwe nekuti vagare kumba kwavo kuWaterfalls kwavakasungirwa uye kuti vaende kunozviratidza kamwechete pasvondo kumapurisa.
Asi muchuchusi wehurumende VaMichael Reza vapikisa kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso uku vachiti kunyangwe hazvo musi wa31 Chikunguru wakapfuura pane boka rakaumbwa rinonzi July 31 Movement ravanoti rinogona kuda kuramba richikurudzira kuti mutungamiriri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vabviswe pachigaro.
VaNkomo vaudza vatori venhau kuti mutongo uchapihwa svondo rino.
Vatiwo zvisinei nemutongo wakapiwa nedare svondo rapera wekuti VaNgarivhume vawaniswe zvekudya pamwe nekushanyirwa vari kujeri reChikurubi, izvi hazvisi kuitwa vachiti vekujeri vakati vaNgarivhume ngavaite zvekudya zvekutenga pamadandemutande izvo vati zvinoda mari yakawanda.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu VaMarufu Mandevere vati hazvina kunaka kuti vemajere vasatevedzere zvinenge zvataurwa nedare vachiti kuzvidza dare.
VaNgarivhume vakasungwa mwedzi wapera pamwe nemutori wenhau VaHopewell Chin’ono vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira. Asi vaviri ava vanoti kuratidzira ikodzero iri mubumbiro remitemo.